Top 5 Amahlathi Emnandi Kunazo Zonke EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Top 5 Amahlathi Emnandi Kunazo Zonke EYurophu
Thina sibhale 5 amahlathi muhlekazi eYurophu ngesikhathi esifanele samaholide amaholide esizini! Isikhathi samaholide esinqunyiwe sabathandi bezokuvakasha abaningi e bhishi. Kodwa IYurophu inenye futhi indlela ezingaphezu kuka ogwini ukuhlola. Hamba nathi njengoba ukuthatha Stomp azungeze ezinye amahlathi amahle kakhulu eYurophu.
Bayakhohlwa amabhishi Kwakugcwele izingane zabo elikhulu futhi kwabadayisi basegaqweni ukubelesela. Ngezinye izikhathi awukwazi beat ukuthula noxolo okuyobe kusezweni zehlathi ezinhle. Ukuba nemvelo ngempela zokwelapha, ngakho ake gambol esinezimila azungeze ezinye Europe kakhulu ayetholakala frondescent.
1st yethu ohlwini Amahlathi Emnandi Kunazo Zonke EYurophu – I Bavarian Ihlathi, Germany
I Bavarian Ihlathi National Park yipaki kazwelonke yokuqala futhi enkulu kunazo zonke eJalimane, futhi omunye emahlathini amahle kakhulu eYurophu. Kungani ungase ubuze? Sicabanga isikhalazo itholakala ehlane yayo elula kodwa luningi. Ngenxa indoda ukuyishiya kahle kuphela! Lesi siqiwu uthembisa obumangalisayo landscape, iziqongo ngokubabazekayo (labo elalidume kunawo wonke kwakuyi Grosser Falkenstein, Lusen, kanye Grosser uRaheli), izintaba olubanzi futhi uhamba ngebhayisikili imizila, esibukweni amachibi, amathuba ezemidlalo, uhamba ibanga elithakazelisayo isihloko, futhi nokuningi.
Efuna ukuthatha umndeni on an adventure okuthakazelisayo futhi eyingqayizivele ngenkathi epaki? Ukuhamba kwesihlahla (Baumwipfelbad) ngesikhathi Bavarian Ihlathi National Park uthembisa ukuhlangana obuseduze bemvelo kanye adventure wonke umndeni. A 1,300 imitha eside isithiyo lokhuni yezinyawo khulula kuholela izivakashi kumila Dome ezimise observation umbhoshongo, ukunikela imibono kumnandi yehlathi endleleni. Ungaphinde ukhethe ukuhlanganyela emisebenzini ethokozisayo endleleni. Nokho, okungcono igcinwa zokugcina. Ukusuka 44 imitha observation okusezingeni eliphezulu emphemeni, uthola ukuzitika amehlo akho ukubukwa ungaphazanyiswa yehlathi ngisho iqhwa abagqoke Alps.
Trillemarka Rollagsfjell Ihlathi, Norway
Siyakwamukela ehlane zasendle! Trillemarka Rollagsfjell Isigcini sendalo ingenye zokugcina intombi izindawo ehlathini isizwe. Lena ekuhambeni yakho ukubeka for izintaba phakathi ukukhula ihlathi ubudala, Ukushushuluza ezintabeni isetshenzwe, futhi ukudoba e r olunothile ngempelaivers nasemachibini. Kukhona nensada, 93 esewonke, zezinto eziphilayo Red leseluhleni. Qiniseka ukuthi sihambe ukuba esifanekisweni ngokuthi Madonna kanye nengane, elise 100 amamitha ngaphandle kwepaki, I-ukubukwa Amazing esigodini nangale. Letha eziningi izingqimba, njengoba isimo sezulu kakhulu izinguquko kulo lonke endaweni.
I National Park we Belluno Dolomites elisukela esigodini Cismon kuze kufike esigodini Piave futhi yasungulwa ngo 1990 ukuba alonde kule nsimu ka ezinkulukazi ukubaluleka kwemvelo, okuyinto kakade usezuze inothi phakathi namakhulu eminyaka ngoba ubuhle flora zayo okukhethekile futhi kuvamile nokuba yayo. Ngenxa yalokho, kwenziwa isinqumo ukuvikela yayo 32000 amahektha we omangalisayo-panorama wemvelo ezemidlalo ebusika ukuthuthukiswa.
Indawo manje isiyi- kazwelonke eyiGugu engabiza elingenakuqhathaniswa lapho, kufanele, imithetho yemvelo. Yini sithanda ngalokhu epaki iyona isetshenzwe kanye ezingafinyeleleki indawo imingcele yaseningizimu empumalanga Alps, okuyinto ezikhathini zasendulo wabona kumiswa izinguzunga zeqhwa (the anyamalale zokugcina phezu 10000 iminyaka edlule!).
Umehluko khona phakathi Tre Cime di Lavaredo kanye Belluno Dolomites, eyaziwa ngokuthi ezintabeni okhanyayo ngenxa umbala rockface. Plateaux akhuthazayo futhi rockfaces vertiginous: lawa haunts ezinkozi segolide, izidalwa cishe edume ngenxa umusa wabo, yabo enhle, ngokubabazekayo ephakeme ngokusebenzisa esibhakabhakeni kanye rarity yohlobo lwazo.
Sithemba esiyisibonelo kini izizathu ngokwanele ukuba ukuvakashelwa Belluno Dolomites futhi kungani sicabanga ukuthi ungomunye emahlathini amahle kakhulu eYurophu.
Ezimweni jewel, France
I umbukwane Parc National des Ecrins ingenye zokulondolozwa eziyishumi French kanye lesibili ngobukhulu emva Vanoise. I 1000 sq endaweni km evikelwe linqamula Hautes Alpes kanye Isère neminyango, esisuka phakathi Bourg d'Oisans, Briancon futhi Embrun. Leli paki lihlala sibonga ikakhulukazi engonakalisiwe indawo yayo akude futhi yebo, kuba kuhla lwethu kwamahlathi muhlekazi eYurophu.
Lesi siqiwu jagged ngesimo sendawo enezintaba ebizwa ngokuthi izinguzunga zeqhwa ukuwa nemifula okusheshayo ogelezayo, okuye wadala izigodi emaweni ewumngcingo. ehlobo, uhamba, rock abaqwali, Bikers entabeni futhi umfula abagijimi zithuthelekela epakini ukuze ujabulele emangalisayo kwenkundla sezulu kanye nemihlathi bephonsa. ebusika, snowshoeing, endlini ngendlu ski babuka futhi izintaba ezidumile. I ski resort ka Alpe d'Huez ihlala nje nangale kwemingcele kwepaki. Okuyi 10 km up switchbacks kusukela Bourg d'Oisans.
Lyon Airport eParis Izitimela
Kugcine yethu ohlwini Amahlathi Emnandi Kunazo Zonke EYurophu – A Ihlathi In A Football Stadium, Netherlands
I Okungapheli Lokuhehako Zemvelo ukufakwa kobuciko besikhashana okuguqula iWorthersee inkundla yebhola lezinyawo. It sikhona e Klagenfurt, futhi manje ihlathi kanye ukufakwa art!
Duzane 300 izihlahla, abanye nesisindo esingamathani eziyisithupha ngamunye uzobe ngokucophelela utshalwe phezu football iphimbo ekhona. Lokhu, enikeza umbono zehlathi central European. Uma utshalwe, ihlathi kuzothatha okuphambene nomthetho yayo, ukushintsha imibala njengoba isizini iyaphenduka ukuheha izilwane zasendle.
Hamba uvakashele kusukela 10 am kuze 10 ntambama nsuku zonke (ukungena mahhala)!
Usukulungele ukuhogela umhlaba fresh futhi moss ezimanzi? Ukuze ujabulele lokujabulela kwelanga anombala ocwazimulayo wezihlahla ekhipha izithunzi siyafiliza emhlabathini? Khona-ke hop ungene Londoloza Isitimela futhi Bhuka zemininingwane Yakho Ticket nomunye emahlathini amahle kakhulu e-Europe, kungakapheli imizuzu!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “Top 5 Amahlathi Emnandi Kunazo Zonke EYurophu” ungene kusayithi lakho? ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-beautiful-forests-europe%2F- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
#ihlathi #amahlathi #okhandlela #ukushaywa #uhlobo iholide